EYEZIQALO 41 - IsiXhosa 1996 (XHO96) - BibleSA
EYEZIQALO 41EYEZIQALO 41
UJosefu uchaza iphupha likakumkani
411Kwadlula iminyaka yamibini, ukumkani waseJiputaOkanye “uFaro” igama ababebizwa ngalo ookumkani baseJiputa waphupha emi ngakumlambo iNayile, 2apho kwathi gqi iimazi zeenkomo ezityebileyo ezisixhenxe, ziphuma emlanjeni, zigramza apho phezu komlambo. 3Kuthe thu ezinye iimazi ezinqinileyo, ezikwasisixhenxe. Zafika zema ngakwezo zaziphezu komlambo. 4Zaza ezo mazi zinqinileyo zazithi bimbilili ezo zityebileyo. Kwesi sithuba waphaphama ukumkani.
5Uphinde walala, wabuya waphupha kwakhona. Ubone izikhwebu ezisixhenxe zengqolowa, zizihle, zivuthiwe, zikhula kwisikhondo esinye. 6Kusuke kwantshula ezinye izikhwebu zengqolowa. Ezo zazintshwenyile, zimbatshiswe lulophu lwasempumalanga. 7Ezo zikhwebu zazintshwenyile zazithi bimbilili eziya zihle izikhwebu. Uphaphamile ukumkani, waza waziqonda ukuba ubephupha.
8Kwasa ekhathazekile yile nto, waza wathi makubizwe zonke izanuse noosiyazi baseJiputa. Wabalawulela amaphupha akhe, kodwa bonke batsho phantsi, ababi nako ukuwachaza.
9Kuvele injoli, yathi kukumkani: “Mandiyivume namhla into yokuba ndenze impazamo. 10Ngokuya wawukhathazekile ngenxa yam nombhaki, wasivalela entolongweni emzini womphathi-balindi bebhotwe, 11kwathi ngabusuku buthile saphupha. Elowo waba nelakhe iphupha, engathethi nto inye loo maphupha. 12Apho kwakukho umfana womHebhere, evalelwe nathi, engumququzeleli womphathi-balindi. Sathi sakumlawulela wasichazela sobabini amaphupha ethu. 13Kwenzeka kanye njengoko wayetshilo: mna ndabuyiselwa emsebenzini wam, waxhonywa yena umbhaki.”
14Ukumkani wathi makabizwe uJosefu, waza ngoko nangoko wakhululwa entolongweni. Akuba etshevile, wanxiba kakuhle, wasiwa kukumkani. 15Waza wathi ukumkani kuJosefu: “Ndinephupha ekungekho bani ube nako ukulichaza. Ke ndivile ukuba uyakwazi ukuchaza amaphupha.”
16UJosefu uphendule ngelithi: “Mhlekazi, andikwazi kuchaza maphupha, koko nguThixo oya kuchazela ukumkani iphupha lakhe.”
17Ulilawule ke iphupha lakhe ukumkani wenjenje: “Ndiphuphe ndimi phezu komlambo iNayile. 18Ndabona kuvela iimazi zeenkomo ezisixhenxe ezityebileyo emlanjeni apho, zigramza. 19Kuvele esinye isixhenxe seemazi ezinqinileyo. Zaziyeyona migqutsuba ndakha ndayibona kwelaseJiputa. 20Loo migqutsuba ke yazithi bimbilili ezo mazi zityebileyo. 21Kambe ke ayikhange ibonakale loo nto, kuba zasala ziyiloo migqutsuba kwanjengangaphambili. Ndaphaphama ke. 22Emva koko ke ndibuye ndaphupha ndibona izikhwebu ezisixhenxe ezihle zengqolowa, zintshula sikhondweni sinye. 23Kuphinde kwantshula nezinye ezisixhenxe izikhwebu zizibi ngathi zitshazwe lulophu lwasempumalanga, 24zazithi ginyi-ginyi eziya zikhwebu zihle. Ndiwalawule la maphupha kwizanuse zalapha, kodwa akwabikho namnye unokundichazela.”
25Uthe ukuphendula uJosefu: “Omabini la maphupha athetha into enye, mhlekazi. UThixo ebekuxelela into aza kuyenza. 26Iimazi ezityebileyo ezisixhenxe yiminyaka esixhenxe, ukanti nezikhwebu ezihle ezisixhenxe zikwayiminyaka esixhenxe. Athetha into enye omabini la maphupha. 27Zona iimazi ezisixhenxe ezinqinileyo, ezivele mva, kwakunye nezikhwebu ezisixhenxe ezibi, ezitshaziswe lulophu lwasempumalanga, yiminyaka esixhenxe yendlala. 28Kunjengokuba besenditshilo, mhlekazi, uThixo ubekuxelela into aza kuyenza. 29Kuza kubakho iminyaka esixhenxe yendyebo kulo lonke elaseJiputa, 30emva koko kubekho iminyaka esixhenxe yendlala; yaye yonke loo minyaka yendyebo iya kuba ngathi ayizange yabakho ngenxa yendlala eya kuligqiba lonke ilizwe. 31Koba ngathi akuzange kubekho ntlutha, kuba indlala eyolandela yoba yeyoyikekayo. 32Ukuphinda-phindwa kwephupha lakho kuthetha ukuthi uThixo selesenzile isigqibo, yaye uselembovu ukuyenza le nto.
33“Ngoko ke, mhlekazi, khetha indoda elumkileyo, enamava, uyenze umphathiswa kweli lizwe. 34Kufuneka utyumbe nabanye abaphathi abaza kugcina isihlanu sesivuno kule minyaka isixhenxe yendyebo. 35Kufuneka bakuqokelele ukutya kule minyaka izayo yendyebo, babe negunya lokuvula oovimba ezixekweni, kugcinwe apho. 36Kukutya okugciniweyo kaloku okuya kondla abantu kwiminyaka yendlala eya kulandela kweli laseJiputa. Ngale ndlela ke abasayi kulamba abantu.”
UJosefu ngumphathiswa waseJiputa
37Ukumkani namaphakathi akhe balivuma eli cebo likaJosefu, 38watsho esithi kubo: “Ngaba singafumana ndoda yimbi ngaphandle koJosefu, umfo owambathiswe ngoMoya kaThixo?”
39Ubhekise kuJosefu ke ukumkani, wathi: “Nguwe oyiboniswe nguThixo le nto yonke. Kucacile ke ukuba asinakubuya sifumane mntu wumbi onobulumko namava, ingenguwe. 40Ndiza kwenza wena ube ngumphathiswa elizweni lam.Mseb 7:10 Bonke abantu bam baya kuthobela wena. Igunya lakho liya kuba ngaphantsi kwelam qha. 41Ngoko ke ndithi ungumphathiswa kulo lonke elaseJiputa.”
42Watsho ukumkani wakhulula emnweni wakhe umsesane owawukrwelwe uphawu lokumkani, wawufaka emnweni kaJosefu. Wamthi wambu ngomnweba owenziwe ngelinen entle, watsho emgaxela entanyeni ngesidanga esenziwe ngegolide. 43Wamnika enye yeenqwelo zakhe ukuba ajikeleze ngayo njengesekela likakumkani. Wamnika namaphakathi okuhamba emgabulela izigcawu endleleni esithi: “Shenxani nikhahlele!” Wamiselwa ke uJosefu, waba ngumphathiswa waseJiputa.
44Wathi ukumkani kuye: “Ukumkani ndim, ndithi ke akukho bani kulo lonke elaseJiputa oya kwenza nto engakhululelwanga nguwe.”
45-46Watsho ke ethiya uJosefu igama abizwa ngalo eJiputa elinguZafenati-paneya, wamzekela nomfazi, uAsenati intombi kaPotifare umbingeleli waseOni.IOni ikwabizwa ngokuba yiHeliyopoli
Ukuqala kwakhe ukungena kwakumkani waseJiputa wayemashumi mathathu ubudala uJosefu. Wemka ebhotwe, walijikeleza lonke elaseJiputa. 47Ngale minyaka isixhenxe yendyebo saba sikhulu kakhulu isivuno. 48Wasivalela koovimba isivuno uJosefu kuzo zonke iidolophu. Kwidolophu nganye wayeqokelela ukutya okuvunwe kumasimi alapho. 49Ingqolowa yayiyintaphane kangangokuba wada wayeka ukuyiveyisha uJosefu. Yayingangentlabathi ukuba ninzi kwayo.
50UAsenati intombi kaPotifera, umbingeleli waseOni, wazalela uJosefu oonyana ababini ngaphambi kwendlala. 51Unyana olizibulo wathi igama lakhe nguManase,Oko kukuthi “uPhumzile” kuba esithi: “UThixo undiphumzile ndatsho ndazilibala iinkxwaleko zam, andawakhumbula namawethu.” 52Owesibini unyana wathi nguEfrayim,Oko kukuthi “uNzaliphindiwe” kuba esithi: “UThixo undiphe inzala kwilizwe endihlupheke kulo.”
53Yaphela ke yona iminyaka yendyebo eJiputa, 54yagaleleka iminyaka yendlala,Mseb 7:11 kanye njengoko wayetshilo uJosefu. Kwalanjwa kuwo onke amanye amazwe, kodwa kulo lonke elaseJiputa kwakukho intlutha. 55Athe akulamba amaJiputa, aya kuzicelela ukutya kukumkani. Wathi ke yena makaye kuJosefu, aze enze loo nto awayalela yona.Yoh 2:5 56Yakhula indlala, yaligqiba lonke elaseJiputa. Wabavula ke oovimba uJosefu, wawathengisela ingqolowa amaJiputa. 57Babevela ngeenkalo zonke abantu elizweni, beze kuthenga ingqolowa kuJosefu, kuba indlala yayiligqugqisile lonke.